अमेरिकीको उम्दा हतियार मोह- ब्लग - कान्तिपुर समाचार
अमेरिकीको उम्दा हतियार मोह
कार्तिक २२, २०७४ दिनेशजंग शाह
काठमाडौं — हालै न्युयोर्क र टेक्सासमा दुई सामुहिक हत्याका घटनाहरु भए । घटनाको प्रकृती फरक भएपनि, दुवै घटनाको एउटै समानता थियो, निशस्त्र निर्दोषहरु मारिनु । सामुहिक हत्याको एक घटनाका सुत्रधार थिए, मुश्लिम आप्रवासी । दोस्रो घटनामा थिए, रैथाने श्वेत अमेरिकी ।
उज्वेकिस्तानबाट डिभी चिठ्ठा मार्फत अमेरिका भित्रिएका ती आप्रबासीको नियोजित घटनालाई आतंकवाद भनेर परिभाषित गरियो । यसमा सबैको एकमत देखिए किनकी घटनाको योजनाकार आप्रबासी भए । दोस्रो, उनी मुश्लिम हुन् । मुलत अमेरिकी समाजले आतंकवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय अर्थात आयातित ‘थ्रेट’को रुपमा बुझ्छ ।
गत आईतबार, टेक्सासको सदरल्याण्ड स्प्रिंगको नरसंहारलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा चर्काचर्की छ । फेरि एकपटक बन्दुक राख्ने विवादास्पद अमेरिकी संवैधानिक अधिकार माथिको बहस चुलिएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले घटना हुनुमा, योजनाकारको मानसिक असन्तुलनलाई जिम्मेवार ठाने । तर विपक्षीहरुको दाबी छ, बन्दुक माथिको सहज पहुँचले निर्दोष मारिए । यहाँनिर कुन तर्क गलत या को सहि भन्ने अहम् प्रश्न नै बाँकी रहेन । किनकी राजनीतिले आफु अनकुल र स्वार्थलाई जोडेर घटनालाई परिभाषित गर्छ । जसलाई उसका लाखौं, करोडौं सर्मथकहरुले शिरोधार्य गछर्न् । ब्यालेट पनि ,त्यसैको पृष्ठभुमिमा चुनिन्छ । चर्को राजनीतिक धुव्रीकरण रहेको अमेरिकामा यो अस्वभाविक होईन ।
तथापी, यहाँनिर स्वभाविक प्रश्न उब्जिन्छ, के राजनीतिक जुहारीकै पृष्ठभुमिमा निर्दोष मारिनुको बोध वा जिम्मेवारी कसैले लिनु पर्छ कि पर्दैन ? निर्दोष मारिने श्रृखलालाई रोक्न असफल हुनु सभ्य, समुन्नत र आधुनिक अमेरिकी समाजका लागि लज्जाको बिषय पक्कै हो । सामुहिक गोलीकाण्डको हकमा, गृहयुद्वको चपेटामा रहेका यमन, अफगानिस्तानकै स्तरमा अमेरिका देखिनुले स्थापित अमेरिकी सभ्यता माथि प्रश्न खडा गरेको छ ।
गत महिना लस भेगासमा ६४ बर्षीय बन्दुकधारीले ५८ जनालाई मारे । जुन इतिहासकै डरलाग्दो गोलीकाण्ड थियो । गत बर्षको फ्लोरिडाको ओरल्याण्डमा ४९ जना निर्दोषलाई एकै चिहान पारियो । सन २०१२ मा कनेटीकेटमा अबोध बालबालिका सहित २७ को हत्या भयो । सन २००७ मा भर्जिनिया टेकमा ३२ जना मारिए । यो सामुहिक हत्याको श्रृखला रोकिएको छैन । अमेरिकी राजनीति मुकदर्शक छ । यथेष्ट प्रयास गरिएको छैन ।
विवादको पृष्ठभुमि जे भएपनि, बन्दुक संस्कृति धेरै हदसम्म नरसंहारमा जिम्मेवार रहेको अधिंकाश बिश्लेषकहरुको मत छ । मानसिक अवस्थालाई जिम्मेवार ठान्नेहरुको बन्दुक मोह उम्दा छ, जो गोलीकाण्डमा मुकदर्शक मात्र बनिरहेका छन् । अहिलेको जुगमा बन्दुक राख्ने अनौठो संवैधानिक ब्यवस्था भएका विश्वकै तीन मुलुक मध्ये एक हो अमेरिका । मेक्सिको र ग्वाटेमाला यो सूचीमा भएपनि, त्यहाँ बन्दुक राख्न पाउने धेरै शर्त पुरा गर्नुपर्ने कानुन छ । तर अमेरिकामा धेरै हदसम्म बन्दुकमा सहज पहुँच थियो र छ । यतिसम्म सजिलो कि सन १९६० को मध्यसम्म अमेरिकीहरुले हुलाकी सेवामार्फत समेत बन्दुक, पिस्तोलको किनबेच गर्न सक्थे । सन १९६८ को राष्ट्रपतिय चुनाव अभियानकै क्रममा जोन अफ केनेडीका भाई रोबर्ट केनेडी गोलीबाट मारिएपछि अमेरिकी कंग्रेस नयाँ विधेयक मार्फत त्यो व्यवस्था बन्द गरेको थियो । त्यसको एक दशकसम्म अमेरिकामा बन्दुक संस्कारलाई निरुत्साहित गर्ने धेरै प्रयास भएको अमेरिकी राजनीतिक घटनाक्रमले देखाउँछ । सन १९७० को दशकमा बन्दुक बिक्रिको कडाईमा रिपब्लिकन पार्टीदेखि नेशनल राईफल एसोसिएसन समेत एकमत भएको देखिन्छ । यहाँसम्म कि रिपब्लिकन राष्ट्रपति जेरार्ड फोर्डले बन्दुक नियन्त्रण गर्ने विधेयक समेत प्रस्ताव गरेका थिए । बिश्लेषकहरुको ठम्याई छ, राजनीतिमा रोनाल्ड रेगनको प्रवेशले स्थितिलाई उल्टाईदियो । रेगनले बन्दुक राख्ने अधिकारलाई अनुदारवादी पार्टीको प्रमुख एजेण्डाको रुपमा स्थापित गर्न सफल भए । रेगनकै पालामा पारिवारिक मुल्य मान्यता, गर्भपतन विरुद्वको अभियान सँगै बन्दुक राख्ने अधिकारको वकालतमा रिपब्लिकन पार्टी खरो उत्रियो र यो स्थिति अहिले पनि त्यस्तै छ । किनकी रेगनको प्रभाव, अहिलेको रिपब्लिकन पार्टीमा उम्दा मानिन्छ ।
पाँच महिनाअघिको पिउ रिसर्चको एक तथ्याङकका अनुसार दश अमेरिकी मध्ये चार जनाको घरमा बन्दुक छ । अहिलेको ४८ प्रतिशत अमेरिकी जनसंख्या, बन्दुक संस्कृतिसँग परिचित हुँदै हुर्किएको तथ्याङ्कले देखाएको थियो । अर्को तथ्याङ्कले देखाउँछ, विश्वको चार दशमलब ४ प्रतिशत जनसंख्या ओगटने अमेरिकाले विश्वका ४२ प्रतिशत हतियार माथिको स्वामित्व लिएको छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ, अमेरिकामा बन्दुकको क्रेज कस्तो छ भन्ने ।
कसरी अमेरिका, बन्दुक संस्कृतिमा जकडियो ? एकछिन पछाडी फर्कौं । अमेरिकी क्रान्ति अघि उपनिवेशबादीहरुले अमेरिकी आदिबासी ‘रेड ईण्डियन’ लाई तह लगाउन मिलिसिया गठन गरे । हतियारले सुसज्जित पारे । जुन ब्रिट्रिस बिरुद्वको अमेरिकी क्रान्तिमा पनि भरपुर प्रयोग गरियो । जब अमेरिका स्वतन्त्र बन्यो, संविधान लेख्ने समय आयो, तब संघीय सरकारको राज्य सरकार माथिको संभावित हस्तक्षेपलाई निस्तेज पार्ने योजना एवम् शक्ति सन्तुलन राख्न, संविधानको धारा दुईमा मिलिसियाको अस्तित्वलाई स्वीकार्दै हतियार राख्ने व्यवस्था गरियो । बलियो वा कमजोर संघीय सरकारको शक्ति संघर्षको पृष्ठभुमिमा कानुनी मान्यता पाएका मिलिसिया, अमेरिकी राजनीतिमा १९ औं शताब्दीभर प्रभावी बने ।
सन १९०३ मा मिलिसिया एक्ट मार्फत अमेरिकी सेना एवम् अन्य सुरक्षा दस्ताको निमार्ण पछि औपचारिकरुपमा मिलिसियाको अस्तित्व समाप्त भयो । मिलिसियाको हतियार बोक्न पाउने अधिकारलाई आम नागरिकको संवैधानिक अधिकारको रुपमा ब्याख्या गरियो । अनेकौं विकसित मुलुकहरुले बन्दुक त्यागे । तर अमेरिका अहिले पनि दुई सय बर्ष अघिकै स्थितिमा छ ।
पिउ रिसर्चले भन्छ, ‘ अमेरिकाको मध्य पश्चिम, दक्षिण र पश्चिम क्षेत्रमा ४५ प्रतिशत भन्दा बढी घरधनीसँग बन्दुक छ ।’ यो परिदृश्यमा बन्दुक अधिकार खारेज गर्ने अभिमत, हरेक राजनीतिज्ञ, पार्टीका लागि आत्मघाती छ । अहिलेको परिदृश्यमा हतियार राख्ने संवैधानिक अधिकार खारेज गर्ने आवाज उठाउने हिम्मत डेमोक्रयाटिक पार्टीले समेत गर्न सकेको छैन् । २७ प्रतिशत घरधनी मात्र हतियार सुसज्जित रहेको उत्तर पुर्वी अमेरिकामा बन्दुक नियन्त्रणको माग कर्णप्रिय लागेपनि, मतदाताको ठुला हिस्सा रहेको क्यालिफोर्निया र टेक्सासलगायत दक्षिण, मध्य एवम् पश्चिमी क्षेत्रमा बन्दुक प्रिय छ । त्यसैले पनि चर्चमा एक बन्दुकधारीले बालबालिका, गर्भवती महिलालगायत दुई दर्जनको ज्यान लिदा समेत, राजनीतिको प्रमुख हिस्सेदार भन्छ, ‘ यसमा बन्दुकको दोष छैन्, मानसिक असन्तुलन नै यसको जिम्मेवार छ ।’ कन्सर्टमा निर्दोष मारिदा पनि राजनीतिले बन्दुक नियन्त्रणको सवालमा खासै आवाज उठाउन सक्दैन । बिक्री बितरणमा कडाई गरौं भन्ने डेमोक्रयाटिक पार्टीको रणनीतिमा झण्डै ६५ प्रतिशत बढी श्वेत मतदाताको प्रतिनिधित्व गर्ने रिपब्लिकन पार्टी मुख्य अवरोधक छ ।
सन १९८१ मा राष्ट्रपति रेगन माथि बन्दुक आक्रमण भयो । उनका प्रेस सेक्रेटरी गम्भीर घाईते मात्र भएनन, प्लारालाईसिस बने । बिल क्लिन्टनको पालामा बन्दुक नियन्त्रण गर्ने विधेयक, जसलाई रेगनका प्रेस सेक्रेटरीको नाममा प्रस्तुत गरिएको थियो । तर रिपब्लकनहरुको असहयोगले तुहियो । बन्दुकप्रतिको अमेरिकीको मोह उम्दा छ । फलत यसले निर्दोषहरुको ज्यान लिइरहेको छ ।
प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७४ १३:४६
युवकद्वारा एउटै कक्षामा पढ्ने साथीलाई छुरा प्रहार गरी हत्या
कार्तिक २२, २०७४ प्रदीप मेन्याङ्बो
धरान — सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका–१ लक्ष्मी सडकस्थित धरान उच्च माविका विद्यार्थी बीच बुधबार छुरा हानाहान हुँदा एक विद्यार्थी गम्भीर घाइते भएका छन् । छुरा प्रहारबाट कक्षा ११ मा अध्यनरत धरान–१६ बस्ने विप्लव पराजुली गम्भिर घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । सोही उमाविमा कक्षा ११ पढ्ने रवि सिंहले सामान्य विवादमा छुरा प्रहार गरेका थिए । उनी फरार रहेका छन् ।
सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका–१ लक्ष्मी सडकस्थित धरान उच्च माविका विद्यार्थीले बुधबार छुरा हानी आफ्नै साथीको हत्या गरेका छन् ।
छुरा प्रहारबाट गम्भिर घाइते भएका कक्षा ११ मा अध्यनरत धरान–१६ बस्ने विप्लव पराजुलीको उपचारकको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । सोही उमाविमा कक्षा ११ पढ्ने रवि सिंहले सामान्य विवादमा छुरा प्रहार गरेका थिए ।
घाइते पराजुलीको विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आकस्मिक कक्षमा उपचार प्रयास भए पनि चार घन्टापछि उनको मृत्यु भएको हाे । उनको बायाँ छातीमा छुरी प्रहार भएको थियाे । छुराको चोट मुटुमा लागेकोले रक्तश्राव नियन्त्रणमा हुन नसकेपछि मृत्यु भएको चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
छुरा प्रहार गरी फरार रहेका सिंह धरान–८ स्थित धनकुटेरोडमा कोठा भाडामा लिएर बस्दै आएको बुझिएको छ ।ईलाका प्रहरी कार्यालय धरानका प्रहरी नायव उपरीक्षक रामेश्वर पौडेलले छुरा प्रहार गर्ने रवि सिंहलाई बुधबार दिउँसो धनकुटे रोडस्थित एक घरमा लुकेर बसेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको बताए ।
विद्यालयका प्रत्यक्षदर्शी विद्यार्थीका अनुसार एउटै कक्षा र एउटै सेक्सनमा पढ्ने पराजुली र सिंहबीच बिहान सामान्य ठट्टा भएको थियो । बिहानको सामान्य ठट्टा विवादमा परिणत भएपछि शौचालयमा पनि सामान्य भनाभन भएको थियो । बिहान ११ बजे विद्यालय बिदा भएपछि पराजुली गेट बाहिर निस्केर घर जाने तरखरमा थिए । त्यसैबेला विद्यालयको कम्पाउण्ड भित्रैबाट दौडेर आएका सिंहले अंगालो मारेजस्तो गरेर छुरा प्रहार गरी फारार रहेको प्रतक्षदर्शीहरुले बताए ।
प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७४ १३:३९
के अंग्रेजी मोहले राष्ट्रियता बलियो होला?
मैथिलीले उचित स्थान पाएन
हाइटेक शिक्षाको कल्पना
धेरै भन्दा धेरै किताब पढ्ने बानीको विकास गरौँ
विश्व बन्धु पोखरेल
हामीले बिदेशमा सिकेको कुरा घरका मान्छेलाई सिकायौं त ?